महिला विवेकहीन हुन्छन् र ? |
महिला विवेकहीन हुन्छन् र ?
प्रकाशित मिति :2017-08-09 10:51:42
श्रावण २५, २०७४- तीजका गीत बज्न सुरु भइसकेका छन् । अब विभिन्न ठाउँमा तीजका लागि भनेर विशेष पसल खोलिनेछन्, महिलाले किनमेल पनि थालेका छन् । अब आपसमा भेटघाट गरेर मिठो–मिठो पकाएर खानेछन्, रमाइलो नाचगान गर्नेछन् । त्यसपछि फेसबुक र आम सञ्चारमाध्यममा महिलाले पार्टी गरे, पार्टी प्यालेसमा रमाइलो गरेर पैसा खर्च गरे, श्रीमानले कमाएको पैसा उडाए, तीजको महत्त्व घटाए भनेर लेखिनेछन् । पहिले तीजमा महिलाले दु:खका गीत गाउँथे, अब त आधुनिक गीत गाउँछन् भनेर व्यंग गर्दै लेख लेखिनेछन् । अहिले जमाना बदलिइसकेको छ, महिला पनि बदलिएका छन् भन्ने कुराचाहिँ किन कसैले ध्यान नदिएको होला ?
देशको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिसँगै महिलाको विचार, भावना, आर्थिक अवस्था पनि फरक भइसकेको छ । अब महिलाले पहिलेको जस्तै केवल दु:खका गीत गाउँदैनन्,, अहिले त आफ्नो अधिकारको गीत पनि गाउँछन्,, देश–विदेश जाने र पढ्न पाउने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र राजनीतिक अधिकारका गीत पनि गाउँछन् । अहिले महिलाले तीजमा नयाँ लुगा र सुनका गहनामात्र किन्दैनन्, जीवनलाई सहज बनाउन चाहिने मालसामान किन्छन्, नयाँ–नयाँ किताब किन्छन्,, कम्प्युटर र मोबाइल, स्कुटर पनि किन्छन् । गाउँ–गाउँमा महिलाको हातमा मोबाइल पुगेकाले महिलाले पनि फेसबुक खोलेका छन् भन्नेबिर्सेर, महिलाले संस्कृति बिर्से भनी हल्ला मच्चाउँछन् । पुराना रीतिरिवाजमा आधुनिकता ल्याउन सकिन्छ भनी किन बिर्सेको होला समाजले ?
अहिले महिलाको हातमा पैसा छ, वभिन्न काम गरेर, दु:खसुख गरेर, आफ्नै व्यवसाय गरेर आफ्नो सन्तान (छोरा–छोरी) लाई पढाएका छन् । विदेश गएर पनि काम गरेका छन्, त्यो पैसाले घरगृहस्थी चलाएका छन् । महिलाले मिहेनतले पैसा कमाएर तीजमा मनोरञ्जन गरे, दिदी–बहिनी, साथीसँग भेटघाट गरेर, रमाइलो गरे भने किन सामाजिक सञ्जालमा आलोचना हुनु, बुझिनसक्नु छ ।
‘क्यासिनोमा गएर लाखौं रुपैयाँ हारेर कुनै पुरुषले घरबार खत्तम गर्छ, त्यो बेला सामाजिक सञ्जालमा यस्तो विवेकहीन कामको कसैले आलोचना गर्दैन, जब भट्टीमा गएर टिल्ल रक्सी खाएर ढलमलिँदै घर आउँछ, एउटा लोग्ने, एउटा बाबु, त्यो बेला सामाजिक सञ्जालमा यसको कहाँ विरोध हुन्छ र ? अनि महिलाले बडो विवेकशील तरिकाले मनोरञ्जन गर्दा किन टाउको दुखाउनु ?
म तीजको व्रत बस्दिन । यस विषयमा जुन दर्शन छ, त्योसँग म सहमत छैन । श्रीमती व्रत बसेर श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने धारणा अवैज्ञानिक हो । तर तीजको सांस्कृतिक पक्षचाहिँ मलाई खुब रमाइलो लाग्छ । म यो बेला आफ्ना दिदीबहिनी, ३०–४० वर्ष अघिदेखिका साथीसँग बसेर गफगाफ गर्न साह्रै मनपराउँछु । आमाको हातको मिठो दालभात, हलुवा र खीर खान हप्तौंदेखि पर्खिन्छु । साथीहरू बसेर दही–चिउरा, चना चपाउने दिन पर्खिन्छु । तीजको दिन व्रत बस्ने मेरी आमालाई जिस्काउँछु, पानी नखाएर बसेका दिदी–बहिनीलाई पनि जिस्काउँछु । रमाइलो गर्छु अर्थात तीज मेरो एउटा रमाइलो सांस्कृतिक पर्व बन्न पुगेको छ । त्यो दिन बाटोमा रातो प्याजी, गुलाबी रंगका लुगा लगाएर नाच्दै–हाँस्दै गरेका दिदी–बहिनी, आमा र बज्यै देखेर रमाइलो लाग्छ ।
तीज अहिले खास कुनै जातमा मात्र सीमित छैन । तामाङ, गुरुङ लगायतले पनि मनाउन थालेका छन् । जसरी छठ पर्व मधेसमा मात्र होइन, नेपालका विभिन्न ठाउँमा मनाइन्छ । त्यसले राष्ट्रिय रूप लिएको छ । अहिले तीजमा कतिपय पुरुष पनि श्रीमतीसँगै व्रत बस्छन् । यसले गर्दा तीजको महत्त्व झन् बढेको छ ।तीजमा रमाइलो गर्न संकोच मान्नुपर्दैन । एकातिर विदेशी संस्कृतिले हामीलाई बिगार्‍यो पनि भन्ने अर्कोतिर तीजमा महिलाले नाच्दा पनि विरोध गर्ने ? उनीहरूले तीजको सांस्कृतिक महत्त्व बुझेर महिलालाई पनि मनोरञ्जन गर्ने, परिवार र बधुबान्धवसँग भेट गर्ने छुट छ भनेर विचार गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा तीजको दर खाने महिलालाई अपराधबोध हुनेगरी लेखिँदैनन् होला ।
८४ वर्षकी मेरी आमा तीजको दरलाई रमाइलो मान्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘म सानो छँदा हातमा पैसा थिएन, कसैले दरको दिन हलुवा–केरा देला, चुरा देला, टीका देला भनेर आस लाग्थ्यो, अहिले मसँग हातमा पैसा छ, म केही वस्तु किन्दा ती पुराना दिन सम्झिन्छु । तर नयाँ बेलाको रमाइलो पनि गर्छु । व्रत बसेर श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिन ।’ ८४ वर्षीया मेरी आमा अहिले पनि दरको रमाइलो मान्न पार्टी प्यालेस जान हिचकिचाउनुहुन्न । म चाहिँ सकेसम्म घरैमा सबै जनाले मिलेर पकाउँ, खाउँ भन्छु । विचार भिन्नाभिन्नै भए पनि दरका बेला हुने रमाइलोचाहिँ एउटै हो । रमाइलोसँग तीजको दर खान नहिचकिचाउँ ।